2 avril, herintaona izay no nahalasa azy ho andron’ny zandary – Malag@sy Miray
2 avril 1969, andro manan-tantara eo amin’ny zandarimariam-pirenena. Andro tsiahivina satria tamin’io andro io, hono, no nanendrena an’i kolonely Richard Ratsimandrava hiadidy ny zandarimariam-pirenena ary izy no malagasy voalohany nahazo izany hoe « Commandant en chef » izany.
Vao herintaona monja no nanombohana nanamarihana izany andro izany fa nandritry ny telo amby efapolo taona dia tsy nisy izany fanamaihana izany. Amin’ity taona ity izany dia afaka hametraka fanontaniana malalaka amin’ireo zandary ny vahoaka malagasy.
Ny ahy dia tsotra ny fanontaniako. Ahoana ny fomba ahafahana manafoana ireny tsolotra sy kolikoly samihafa ataon’ny sasantsasany amin’ireo zandary? eny amin’ny lalam-pirenena ohatra, eny fitiliana ara-teknika ny fiarakodia na ny « visite technique » koa ohatra na koa izay dahalo sy olon-dratsy tratra nefa avotsotra tsy hay hoe nahoana.
Dia tiako ihany koa ny manontany hoe fa ahoana mihitsy moa rehefa misy olona mifanolana amin’ny aditany ka ny iray miseho mahafantatra na akaikikaiky olona ambony ao amin’ny zandarimaria, na ihany koa manonona anarana zandary malaza hoe akaiky azy dia mampitahotra ny hafa fa tsy mandeha amin’ny « procédures normales » tsy misy « influence » na inona na inona?
Dia ny farany dia hoe, tena misy ve remenabila satria i Tokanono aloha dia heno fa nalefa ao Antanimora ao amin’ny fonjan’ny vehivavy ao. Raha misy marina izy dia nanomboka oviana izy no tena nanao ny asa ratsiny? firy ireo zandary no efa nahita azy maso sy nifanehitra taminy ary firy amin’ireo dahalo manerana an’i Madagasikara no tsy mahafantatra ny endriny akory? Dia raha tsy hita mazava ny endriny amin’ny karazan-tsary maromaro dia ahoana no ahafantaran’ny mpitandro ny filaminana azy.
Ary farany, nahoana no misy fifanolanana eo amin’ny mpitsara sy ny zandary sy ny polisy ary ny mpiandry fonja? dia inona ny olana tsy hihavanana marina sy iaraha-miasa amin’ny fo madio tsy misy fihatsaram-belatsihy?
Aoka ny vahoaka sy ny fananany no arovanareo tompoko fa tsy ireo izay be sôsy sy ny vahiny fotsiny ihany.